Depiote nivadika : Lany fotsiny ny volan-dRavatomanga -
AccueilRaharaham-pirenenaDepiote nivadika : Lany fotsiny ny volan-dRavatomanga
« Malaza tsy hihinanana tahaka ny vilian-tsahona ». Izay no azo ilazana ireo depiote nanao fanambarana miezinezina sy naely mafy fa nivadika nanohana an’i Andry Rajoelina.
39,23% no azon’i Andry Rajoelina nandritra ny fihodinana voalohany, araka ny voka-pifidianana navoakan’ny HCC omaly. Tsy nisy fiovana firy tamin’ny vokatra navoakan’ny CENIn, izay nahazo izao karazana fanakianana sy fanaratsiana rehetra izao avy tamin’ny TGV sy ny MAPAR. Nanakoako mihitsy anefa ireo fanambarana nisesisesy nataon’ireo depiote nivadika, lasa nanohana ity “jeune putschiste” ity talohan’ny nisokafan’ny fampielezan-kevitra toa an-dry Jaona Elite, Siteny Randrianasoloniaiko, Luc Ratsimbazafy, Lova Razafindrafito (Paupile) tahaka ny milaza fa efa vita ny fifidianana azy, azon’izy ireo ny fandresena.
Lany fotsiny ny volan’i Mamy Ravatomanga nisintonana ireto solombavambahoaka ireto nanohana an’i Andry Rajoelina tamin’iny fihodinana voalohany iny. Voaporofo mantsy izao fa depiote tsy mahazaka vahoaka akory izy efatra mirahalahy ireto, raha tsy hiresaka afa-tsy Antananarivo Atsimondrano (Andry Rajoelina 39,57%; Marc Ravalomanana 50,53%), Ambohidratrimo (34,95% Andry Rajoelina; 55,53% Marc Ravalomanana).
Vola azo tamin’ny kilaodaoka rahateo koa moa ny an’i Mamy Ravatomanga ka nataon’ny sasany tantely afa-drakotra, izay nampanantena fa mahazaka vahoaka handresena fihodinana voalohany dia nahazo izay nilainy avokoa, ary izay fivoahan’ny miliara be tany am-paosiny izay mihitsy no tena fahavoazana ho an’i Mamy Ravatomanga amin’izao fotoana. Lany fotsiny ny vola be kanefa tsy tratra akory ilay “1er tour de vita” nanapoahana “champagne” tao amin’ny Arena ny alin’ny faha-7 novambra 2018.
Azo antoka araka izany fa hoteren’i Mamy Ravatomanga hamoaka izay fara-fananany ireto depiote ireto amin’ity fihodinana faharoa ity. Tsy vao izao akory no nahafantarana izany Mamy Ravatomanga sy ny fitiavam-bolany izany! Sady manohana no mamoaka am-paosy raha tsy izany…